Shina Modely No: Shinoa Manufacture Manual Control Q43 Series Hydraulic Scrap Metal Alligator Shear Machine orinasa sy mpamatsy | Miray Top
Modely No: Fanaraha-maso Manufacture Manual Q43 Series Hydraulic Scrap Metal Alligator Shear Machine
Hydraulic scrap metal alligator shearing machine dia mety ho an'ny orinasa fanarenana metaly, kojakoja fikosoham-bary, fandrendrehana ary orinasa fanariana hanapaka endrika vy sy rafitra vy isan-karazany amin'ny fanjakana mangatsiaka mba hikarakarana ny lafaoro mahafeno fepetra.
MODELY Série Q43
Hery fanapahana Max 63-630Ton
Lavan'ny blade 600-1800mm
hetsika Fanaraha-maso tanana
Hydraulic scrap metal alligator shear machine dia mety amin'ny fametahana mangatsiaka ny profil metaly amin'ny endriny isan-karazany (toy ny vy boribory, vy efamira, vy fantsona, vy Angle, vy I-beam, sns.) ampahany ara-drafitra metaly isan-karazany, ka mahafeno ny fepetra takian'ny fiampangana, ary mora ny mitahiry sy ny fitaterana. Afaka manome serivisy fanohanana ho an'ny indostria maro toy ny orinasa fanarenana metaly, indostrian'ny fanariana sy fandrendrehana, indostrian'ny fanamboarana milina sy ny sisa.
●Ny mpanety vy hydraulika alligator dia mampiasa fiara hydraulic
● Raha oharina amin'ny milina fanetezana nentim-paharazana mekanika, ny hydraulic alligator shear machine dia manana boky kely, lanjany maivana, inertia kely, tabataba ambany, tombony amin'ny hetsika malefaka.
●Lehilahy ho an'ny halavan'ny lelany: 400mm, 600mm, 700mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, hety hery avy amin'ny 63-600 taonina, ny totalin'ny 10 ambaratonga. 700mm ambonin'ny milina mpanety lelany, indrindra ho an'ny fanapahana fiara simba.
●Hydraulic alligator shear manana tsotra sy azo antoka fandidiana, dia mety ny hanitsy ny manety lelan-tsabatra.
●Alligator mpanety milina manana fanompoana ela velona, ​​manatsara ny asa fahombiazana.
●Manual na PLC fanaraha-maso mandeha ho azy dia mora ny miasa sy ny fikojakojana.
●Ny mpanjifa dia afaka misafidy herinaratra na milina mpamokatra herinaratra mandeha amin'ny gazoala, milina fiara diesel dia afaka manampy anao hanety metaly.
Ny fanaraha-maso manual, dia mety kokoa amin'ny fandidiana, fikojakojana tsotra.
Azontsika atao ny milina kely rehetra-in-iray, pedal frein mba hifehezana ny hety.
1. CYLINDER ANTSO
Alohan'ny hanombohan'ny milina fanetezana alligator hanety fitaovana, ny cylinder mpanao gazety dia mitazona ny fitaovana hanamboarana ny koba, Mora kokoa ny manety, manatsara ny fahombiazan'ny asa.
Azontsika atao ny manamboatra ny rafitra hydraulika ho an'ny milina fanetezana alligator ary misafidy marika malaza ho an'ny herinaratra araka izay ilainao.
Hery fanapahana max (taonina） Length Blade (MG） Max fanapahana habe (MG） Fanetezana matetika (fotoana/min）
Hydraulic scrap metal alligator shear machine dia manome ampahany amin'ny milina marika malaza, niara-niasa tamin'ny mpamatsy marika malaza eran-tany izahay, toa an'i SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI sy ny sisa nandritra ny 10 taona mahery.
Hampiasa fonon-tsarimihetsika voafono sy fonosana hazo izahay mba hiarovana ny milina fametahana alligator hydraulika, hanao fiarovana tsara ho an'ny fanetezana alligator izahay alohan'ny hampidirana fitoeran-javatra.
Jereo ny milina fanosehana Hydraulic Alligator ho an'ny fanapahana metaly amin'ny asa!
teo aloha: Model No: Shinoa Manufacture Automatic Control SPJ Series milina shredder vy
Manaraka: Modely No: Shinoa Manufacture Q91Y Series Hydraulic scrap vy milina mavesatra hety
Aluminum Foil Baler Machine, Y81 Hydraulic Baler, Scrap Metal Compactor, Leaf Compactor sy Baler, Fitaovana Pop-Top Can Baler, Baler baoritra vita an-trano,